Ciyaaryahanadda Real Madrid ayaa ku soo laabtay tababarka khamiistii ka dib markii laga reebay Copa del Rey xalay oo ay gacanta ku hayaan fasalka seddexaad ee Alcoyano, kaasoo ku guuleystay 2-1 waqtigii dheeriga ahaa.
Dhowr ciyaartoy ayaa la filayaa inuu canaanto Zinedine Zidane. Qaarkood xitaa waxay u diyaar garoobeen inay wajahaan hadalo qalafsan oo uga yimaada hogaamiyahooda.
Laakiin sida laga soo xigtay wargayska Marca, ciyaartoyda Los Blanco ayaa layaab ku noqotay in Zidane uu wax kayar laba daqiiqo kula hadlay kooxda shir jaraa’id ciyaarta kadib wuxuuna sheegay in guuldaradu ceeb ahayn. Wayna dhacdaa.
“Waxaan sameyn karnaa wax ka sii fiican,” ayuu yiri, isagoo ku booriyay xiddigaha Los Blancos inay wada shaqeeyaan si xilli ciyaareedka loogu rogo.
In kasta oo ay ciyaartoydu ogyihiin in Zidane uusan xanaaqin, inbadan ayaa filayay inay la kulmaan Khamiista. Laakiin way la yaabtay sida uu kooxda ula hadlay.
Fahamka qolka labiska maahan sidii hore. Ciyaaryahanadda ayaa isku arka inay aad uga fog yihiin Zidane tan iyo markii uu ku soo laabtay kooxda.
Ciyaaryahanadda aan ciyaarin inta badan ama aan haba yaraatee aan faraxsanayn oo aan qarin nasiibdarradooda. Xitaa kuwa sida joogtada ah u ciyaara ma fahansana qaar ka mid ah go’aamada uu qaatay tababaraha Faransiiska.
Zidane ayaa kaliya isticmaalay 14 xiddig xilli ciyaareedkan isaga oo iska indha tiray kooxda inteeda kale.
Lionel Messi ayaa laga saaray ciyaarta